मेरो ब्रेकअपमा तपाइँलाई किन चासो भन्दै आयुष्मान पत्रकारसँग यसरी जंगिए (भिडियोसहित)
काठमाडौं। अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी र पत्रकारबीच भनाभन भएको छ। आइतबार नेपाली चलचित्र ‘चङ्गा चेट’को टेलर रिलिज कार्यक्रममा पत्रकारले चलचित्रकी नायिका प्रमिता राना र नायक आयुष्मानको ब्रेकअपको विषयमा कुरा गर्दा आयुष्मान रिसको स्वभावमा प्रस्तुत भएका थिए। कार्यक्रममा एकजना पत्रकारले चलचित्रका…
गाउँको गहिरो इनारमा खस्यो चितुवा, भिडियोमा हेर्नुहोस् घण्टौं लगाएर यसरी गरियो उद्धार
एजेन्सी। भारतको मध्य प्रदेशको यादववाडी गाउँमा एक किसान इनारनजिकै पानी तान्ने पम्पको स्विच बन्द गर्न जाँदा इनारभित्रबाट आवाज आइरहेको सुने । उनले गएर हेर्दा देखे कि इनारभित्र एउटा चितुवा खसेको थियो । किसानले तुरुन्त गाउँलेहरुलाई बोलाए । गाउँलेले वन विभागमा…
उडिरहेको विमान अक्सिजन कम भएपछि रगत बग्न थाल्यो हेर्नुहोस् भिडियो
नयाँदिल्ली । बिहीबार भारतको मुम्बैमा उडिरहेको विमानमा अक्सिज कमी भएपछि विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराइयो । मुम्बैबाट जयपुरका लागि उडेको जेट एअरवेजको विमानमा अक्सिजन कमी भएपछि यात्रुहरुको नाक र कानबाट रगत बग्न थालेको थियो । जेट एअरवेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो…
काउली बुढिले ल्याइन तीज गीत (भिडियो सहित)
काठमाडौ । हाल अति नै चर्चामा आएकी काउली बुढी नेपालको चर्चित रियालीटी शो नेपाल आइड सिजन २’ मा देखाएको प्रस्तुतीका कारण अझबढी चर्चामा चुलिएकी छन् । अहिले धेरै काउली बुढीको चर्चा मात्र सुनिएको छ । अहिले काउली बुढी अर्थात सन्ध्या…
स्वादिष्ट म्याकरोनी पास्ता बनाउने तरिका
काठमाडौं । नेपाली भान्सामा खाजाको लागि धेरै जसो पाक्ने परिकार चाउचाउ हो । तर पछिल्लो समय पाहुनाको स्वागतको लागि समेत म्याकरोनी पास्ता बनाउने गरिन्छम , जुन बनाउनको लागि छिटो र सजिलो छ । म्याकरोनी स्वादिष्ट र भोक मेटाउनको लागि…
यौन उत्तेजना महिलामा ६ गुणा बढी हुन्छ तर महिलाले बलात्कार गरेका छैनन् : सावित्री सुवेदी
काठमाडौं । नेपालमा महिला बलात्कारका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । कतिपय बालीकाको बलात्कार पछि हत्या गरिएको छ। महिनावारि भएका, गर्भवती भएका, वृद्धाहरु समेत बलात्कार भएका घटना भइरहेका छन् । सावित्री सुवेदी महिला अधिकारकर्मी हुन् । बलात्कार विरुद्ध बोल्ने उनले पेटिकोट…
देहव्यापारमा कलिला बालिका (भिडियो सहित)
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंमा देह व्यापार ओपन सेक्रेट विषय हो । कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, प्रहरीकै अगाडी देह व्यापार हुन्छ । रत्नपार्क होस वा गौशाला देहव्यापार खुल्ला रुपमै हुन्छ । तर खोजपत्रकारिता केन्द्र सिआईजेले भने देहव्यापारमा कलिला बालिकाको…
थाह पाउनुस् काठमाडौंको नयाँ ट्याक्सी नियम, ड्राइभरको पोषाक हेर्नुस् (भिडियो)
काठमाडौं । ट्याक्सी ड्राइभर को हो भनेर अब कन्फ्युज हुनु नपर्ने भएको छ । ट्याक्सी चालक टाढैबाट पोषाकले चिनिनेछन् । चालकले अनिवार्य पोषाक लगाउनु पर्ने नियम आज बुधबारदेखि लागू गरिएको हो । थाह पाउनुस् किन सुरू भयो यो नियम? फाइदा…
रोचक दृश्यः मन्त्री उपेन्द्र यादव संसद बैठकबाट गायव भएपछि जे देखियो.. (भिडियो)
काठमाडौं । आज मंगलबरको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जुन विषयको छलफल चलिरहेको थियो, त्यही विषयका विभागीय मन्त्री बैठकमा नभएपछि खैलाबैला मच्चियो । छलफल चल्दै थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विधेयकमाथि । तर बैठकमा थिएनन् स्थास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव । भर्खरै रोष्टममा बोलेर विदा भएका…
कालिमाटी तनावः मन्त्री मात्रिका यादवको पुरानै 'स्टन्ट', 'अन द स्पट' कारवाही ! (भिडियो)
काठमाडौं । कालीमाटी स्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा तनाव भएपछि उद्योगमन्त्री मात्रिका प्रसाद हतारहतार हान्निएर फिल्डमै पुगे । तत्काल एक्सन लिने जोसिला मन्त्री मध्येमा पर्ने मात्रिकाले मिडिया र उपस्थित भिडकै माझमा सरकारी कर्मचारीमाथि आक्रोश पोखे । यस अगाडि मन्त्री हुँदा…
सिरिया गृहयुद्ध अन्तिम मोडमा, असद जित नजिक
परेवालाई चारो हाल्दै एक महिला
पूर्वराज्यमन्त्रीको शिक्षा मोह, 'पदभन्दा सेवा महत्वपूर्ण’'
यो देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्प छैन् : माधव नेपाल (भिडियो)
अमेरिकामा मिरा राईलाई सम्मान र सहयोग
उर्जामन्त्री पुन र चिनियां उपमन्त्री विलियाङ्गबीच आपसी हितबारे छलफल
गुरुङ चलचित्र 'रिजे नासा' की कलाकार एलिना गुरुङलाई हङकङमा सम्मान
आईजिपी खनालले लगाए प्रहरी अधिकृतलाई टिका
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा 'जनमन्च अमेरिका' संगठन बिस्तार